Rosia 10 000 mahery iray andro, voa ny praiminisitra ...
Formule 1 Niangaviana handray fifaninana roa i Shanghai
Nambaran’ny tompon’andraikitra Sinoa iray, Atoa Xu Bin « directeur de l'administration des sports de Pékin » tao amin’ny haino aman-jery “agence Xinhua, fa nangatahan’ny FOM na “Formula One Management”
Burundi Nijanona tampoka ny fon’ny filoham-pirenena
Namoy ny ainy teo amin'ny faha 55 taonany ny alatsinainy tolakandro teo ny Filoham-pirenen'i Burundi, Pierre Nkurunziza, izay efa nitondra hatramin'ny taona 2005.
Mpiasan’ny fahasalamana Mitaky vahaolana mahomby
Mampiaka-peo sy manaitra ny fanjakana ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy, ny sendikan’ny infirmiera sy ny mpampivelona, ary miantso ny mpiasan’ny fahasalamana hiara-hientana aminy mandritra ny hetsika hataon’izy ireo ny zoma 12 jona izao.
Ambasadaoron’i Royaume-Uni Nisafidy ny hampiasa fiara Karenjy
Nampahafantatra ny fiarany ny Masoivohon’i Raoyaume-Uni eto Madagasikara Atoa Phil Boyle, ary reharehany mihitsy ny naneho tao amin’ny tambajotra Twetter, fa fiara vita Malagasy no ampiasaina.
Fibodoan’i Lafrantsa ireo Nosy Malagasy Porofon’ilay sarintsarina fahaleovantena
Efa manakaiky ity ny 26 jona 2020, andro hankalazan'ny malagasy ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovantena.
Orinasa Ambatovy Teratany vahiny 150 handeha hody
Hiala any Toamasina anio ireo teratany vahiny niasa tao Ambatovy miisa 150 avy amina firenena samihafa. Hisy fiaramanidina manokana haka azy ireo, hitondra azy ireo hitodi-doha any amin’ny firenena nihaviany avy.
Tranga vaovaon'ny Covid 19 Olona 108 tapitrisa naverina nahiboka any Chine
Raha ny fitrangany manerana izao tontolo izao dia ity aretina Covid 19 ity no hita ho sarotra resana indrindra tamin’ireo aretina rehetra nihanaka teto ambonin’ny tany.
Taorian’ny fotoana lava dia isan’ireo firenena tsy mba voakasika firy i Rosia, izay 2200 teo ny olona voa tany amin’ny faran’ny volana martsa.
tsy miaintsy miatrika ny mafy anefa ity firenena ity satria tao anatin’ny 24ora dia 10 559 no indray voa, izay efa nisesy tao anatin’ny efatra andro. Mahatratra 165 929 ny tranga voaisa, izay mametraka an’ity firenena ity firenena faha-5 be olona voa indrindra any eoropa. Mpitondra ambony maromaro no voamarina fa voa, ka isan’izany ny praiminisitra Mikhaïl Michoustine, ny minisitry ny kolontsaina Olga Lioubimova, ny minisitry ny fanorenana Vladimir Lakrouchev. 1537 ny fitambaran’ny maty kanefa ahiana hidangana amin’izay.
Mbola hidangana hatrany ny isa
nahatratra 2333 ny olona maty tany etazonia ny andron’ny talata teo ary mitombo hatrany ny isan’ny voa izay eo anelanelan’ny 25 000 hatramin’ny 30 000 isan’andro. omaly dia efa 73 234 ny isan’ny maty. 1 246 462 no voa, ka ny 8829 ny tranga vaovao. ahiana hatrany ny toe-draharaha any etazonia izay tombanana hiakatra ho 3000 isan’andro indray no ho faty hatrany amin’ny faran’ny 1 jona, ary ho 200 000 ny olona ho voa.
Ho lasa ivon’ny coronavirus atsy ho atsy
manomboka tena lasibatra amin’izay ihany koa i Brésil amin’izao fotoana izao, ary efa ny 2 mey lasa teo no nanao fanairana ny tompon’andraikitry ny laboratoara misahana ny fahasalamana ao amin’ny oniversiten’i sao paulo. 600 no indray maty tao anatin’ny iray andro ny talata teo, ary hatramin’ny omaly dia 121 600 ny voa, ka 6 885 vaovao. 8022 no efa namoy ny ainy amin’ity firenena tombanana ho lasa ivon’ny coronavirus any Amerika atsimo ity.
7,4% ny fitotonganan’ny harin-karena 2020
Hitotongana hatrany amin’ny 7,4% ny harin-karena faobe any eoropa ho an’ny taona 2020 mialohan’ny hiakarany 6,1% ho an’ny taona 2021 raha ny tombana. isan’ny tena hizaka ny mafy i italie, espagne, grèce, araka ny fanadihadiana ara-toekarena mandeha, ka hatrany amin’ny 2 taona vao mety ho vita ny fanarenana satria ambonin’ny 9% ny fitotonganana. mety hisy ny fizarana eo amin’i eoropa avaratra sy atsinanana.
Nitarina ny famehana ara-pahasalamana
nitarina hatramin’ny 10 jolay ny famehana ara-pahasalamana any frantsa. na izany aza, dia anio no hamoaka ny drafi-pialana tsikelikely amin’ny fihibohana ny praiminisitra Edouard Philippe. 25 809 ny maty ary, 278 tao anatin’ny 24 ora tany frantsa. omaly kosa no namoaka ny drafitra momba ny kolontsaina ny filoha frantsay satria hatrany amin’ny 1,3 tapitrisa ny mpisehatra amin’izany (teatra, cinema, hetsika ara-javakanto,…), ka isan’ny hapetraka ny tahiry ara-bola hoenti-manampy azy ireo.
Nangonin’i Toky R